March 2009 | ပြတိုက်
ရုံဝင်ကြေးမလိုတဲ့ ပြတိုက်ထဲက ခံစားမှု ပြယုဂ်များ.........
Published at 1:56 AM in ဟာသ အတိုများ..
oိဇ္ဖာ ကာတွန်း များ
Published at 10:35 PM in စာအုပ်စင်....
၀ိဇ္ဖာ - ဟိုတုန်းကလိုလူစား (ရွှေအဆင်း-ခေတ်ပြိုင်မှတ်စုများ)
၀္ဖိဇ္ဖာ - လူနဲ့မျက်နှာ (ရွှေအဆင်း- ခေတ်ပြိုင်မှတ်စုများ)
၀ိဇ္ဖာ - တစ်ရွာလုံးနဲ့တစ်ယောက် (ရွှေအဆင်း-ခေတ်ပြိုင်မှတ်စုများ)
၀ိဇ္ဖာ - ရွှေအဆင်း
၀ိဇ္ဖာ - မျှတသောမိုးရေ (ဗီတာမင်စာစုများ)
၀ိဇ္ဖာ - မေတ္တာဖြန်းမှလန်းဆန်းမယ်သာယုံ (ဗီတာမင်စာစုများ)
၀ိဇ္ဖာ - ရွှေအိုရောင်မှတ်တမ်း (ဗီတာမင်စာစုများ)
၀ိဇ္ဖာ - သန္ဓေ (ဗီတာမင်စာစုများ)
၀ိဇ္ဖာ - ကျွန်တော်၏ဓာတ်တိုင်
Published at 1:54 AM in ဟာသ အတိုများ..
- "ဆရာ.. ကျမရည်းစားကို အရမ်းစိတ်ဆိုးတာပဲ... မျိုးမစစ်လို့တောင် ခေါ်သင့်တယ်...
'Hmm? Suchaword is strong and rude.But may be you have
your own reasons. Tell me about it so that I can help you.'
- "ဟင်း... အရမ်း ရင့်သီးတဲ့ စကားလုံးပဲကွယ့်... ဒါပေမဲ့ မင်းမှာ အကြောင်းတော့ရှိမှာပေါ့လေ..
ငါ ကူညီနိုင်ရအောင် အဲဒီအကြောင်းပြောပြပါဦး..."
- "ဟုတ်တယ် ဆရာ... ခုဆရာ ကိုင်ထားသလိုပဲ..."
- "အဲဒါကြောင့်ပဲ ဆိုရင်တော့ မျိုးမစစ်လို့ မခေါ်သင့်ပါဘူးကွယ်..
- "အလို နမ်းတာလေးနဲ့တော့ မျိုးမစစ်လို့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် မခေါ်သင့်ပါဘူးကွယ်..
- "ဟုတ်တယ် ဆရာ.. ခုလို အ၀တ်အစားမဲ့သွားတဲ့တိုင်အောင်ပဲ..."
'Then he kissed me and put his **** inside me and had **x with me...'
- "မျိုးမစစ်လို့ မခေါ်သင့်သေးပါဘူးကွယ်... သူအတွက် မင်းရှိဖို့
မောင်မင်း ရရှိသင့်တဲ့အပြစ်ဒဏ်က ဒီအမျိုးသမီးနဲ့သံသရာတိုင်အောင်ပေါင်းသင်းနေထိုင်
နင်းမိပြန်တာပေါ့။ မြန်လိုက်တဲ့စိန့်ပီတာ လှစ်ခနဲရောက်လာတယ် ဒီတစ်ခါပိုလို့တောင်ရုပ်ဆိုးတဲ့
သေချာတာကတော့ သူနဲ့အဲဒီအမျိုးသမီးနဲ့စုံဖက်ပေးတော့မှာပါ။ စိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့ စိန့်ပီတာကို
Published at 1:42 AM in မှတ်သားဖွယ်ရာများ........
တစ်ခါက ဥရောပတိုက်ဘက်မှာ ဘုရင်တစ်ပါးရှိတယ်။ အဲဒီဘုရင်ဟာ သူ့ဥယျာဉ်ထဲမှာရှိတဲ့ ပန်းပင်တွေ၊
သစ်ပင်တွေနဲ့ စကားပြောလေ့ရှိတယ်။ သူဟာ ဥယျာဉ်ထဲရောက်တဲ့ အခါတိုင်း အပင်တွေကို အရမ်းပွင့်၊
အရမ်းသီးခိုင်းလေ့ ရှိတယ်။ တစ်နေ့မှာ သူဟာ ဥယျာဉ်ကြီးထဲကို ရောက်သွားတယ်၊ ၀က်သစ်ချပင်ကြီးဟာ ညှိုးပြီး
ခြောက်သွေ့ နေတယ်၊ အဲဒီတော့ "ဘာဖြစ်တာလဲ" လို့ သူက မေးလိုက်တယ်၊ ၀က်သစ်ချပင်ကြီးက
"ဘယ်လိုဖြစ်ရမှာတုံး၊ ကျုပ်က ထင်းရှူးပင်ကိုတုပြီး အပေါ်ကို တက်တော့ ထင်းရှူးပင် မဟုတ်လေတော့
အမြစ်အားက မခံနိုင်တော့ သေရတာပေါ့"။ အဲဒါနဲ့ ထင်းရှူးပင်ဆီကို သွားပြန်တော့ ထင်းရှူးပင်ကြီးက
ကိုင်းပြီးကွေးကျနေတယ်။ အဲဒီတော့ ထင်းရှူးပင်ကြီးကို "ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ" လို့ဘုရင်ကြီးက မေးလိုက်ပြန်တယ်။
အဲဒီတော့ ထင်းရှူးပင်ကြီးက "ကျုပ်ကလည်း စပျစ်ပင်ကြီးကို အားကျပြီး အသီးတွေ အရမ်းသီးလိုက်တယ်၊ စပျစ်ပင်
မဟုတ်လေတော့ မခံနိုင်တော့ဘဲ အခုလို အရမ်း ကွေးသွားတာပေါ့" လို့ပြောတယ်။ စပျစ်ပင်ကြီးကလည်း
သေမလိုဖြစ်နေတယ်၊ "ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ" လို့မေးတော့ "ကျုပ်က နှင်းဆီပင် ကို အားကျပြီး သူလို လိုက်ပွင့်တာဗျို့၊
အဲဒီတော့ စပျစ်သီးလည်း မသီးတော့ဘူး၊ နှင်းဆီပန်းလဲ မပွင့်တော့ပဲ အခုလို သေလုမျောပါး ဖြစ်သွားရတာပဲ"
လို့ပြောပြန်တယ်။ အဲဒီမှာ ဘုရင်ကြီးက ဆက်ပြီးလျှောက်သွားတဲ့ အခါမှာ အပင်လေးတစ်ပင်ကို တွေ့တယ်။ အပင်က
သိပ်မကြီးပါဘူး။ အရွက်လေးတွေ အကိုင်းအခက်လေးတွေလည်း စိုစိုပြေပြေနဲ့၊ အပွင့်က ရနံ့လေးတွေကလည်း
သင်းပျံ့လို့၊ အဲဒီအပင်ရဲ့ နာမည်က Heart's Ease (နှလုံးအေးချမ်း ပန်း) လို့ခေါ်လေ့ ရှိတဲ့ အပင်လေးပါပဲ။
ဘုရင်ကြီးက အဲဒီအပင်လေးကို ကြည့်ပြီး "ငါ့ရဲ့ ဥယျာဉ်တစ်ခုလုံး မှာရှိတဲ့ အပင်တွေ သေတာတွေ သေကုန်ပြီ၊
တချို့လည်း သေလုမျောပါ ဖြစ်နေပြီ။ နှလုံးအေးချမ်းရယ်… မင်းကတော့ ရှင်သန်စိုပြေလို့ ပါလား… ဘာကြောင့်လဲ"
လို့မေးလိုက်တယ်။ အဲဒီမှာ အပင်ကလေးက ဘာပြန်ပြောသလဲ ဆိုတော့ "အသင်မင်းကြီး ကျွန်ုပ်ကို ဒီဥယျာဉ်မှာ
စိုက်ကတည်းက နှလုံးအေးချမ်းကို နှလုံးအေးချမ်းလိုပဲ ဖြစ်စေချင်ပုံရပါတယ်… ၀က်သစ်ချပင်လို မဖြစ်စေချင်ဘူး…
ဒါကြောင့် ၀က်သစ်ချပင်ကိုလည်း အားမကျခဲ့ဘူး… အဲဒီလိုပဲ ထင်းရှူးပင်မြင့်မြင့်ကြီးတွေကိုလည်း အားမကျခဲ့ဘူး…
အသီးတွေပြွတ်နေအောင်သီးတဲ့ စပျစ်ပင်ကိုလည်း အားမကျခဲ့ဘူး… အပွင့်ကြီးတွေ ဝေဆာနေတဲ့
နှင်းဆီပင်ကိုလည်း အာမကျခဲ့ဘူး… နှလုံးအေးချမ်းဟာ နှလုံးအေးချမ်းလိုပဲ နေခဲ့တယ်… နှလုံးအေးချမ်းလိုပဲ
ရှင်သန်ခဲ့တယ်… အားကျပြီး ဘာကိုမှမလုပ်ခဲ့ဘူး… ဒါကြောင့် နှလုံးအေးချမ်း အဖြစ်နဲ့ပဲ
ရှင်သန်ရပ်တည်နေနိုင်တာပေါ့ … တခြားဘာမှမဟုတ်ဘူး" လို့ပြန်ပြီးပြောလိုက်တယ်… .
ကဲဒီပုံပြင်လေးရဲ့ ဆိုလိုရင်းကလည်းရှင်းလှပါတယ်နော်.... သူတဖက်သားကို အတုယူပြီးအားကြပြီး လိုက်တုတာ မကောင်းသောအကြင့်လို့ မဆိုလိုနိုင်ပေမဲ့ .... မတုရင် တုလို့ မရတာတွေ အများကြိီးပါရှင် .. ဒါကြောင့် ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ အရည်ချင်း ကိုရထားတဲ့ ဘ၀ကိုသာ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ကြိုးစားမယ်ဆိုရင် ... ဒီပုံပြင်လေးထဲက နှလုံးအေးချမ်း အပင်လေးလို့ပဲ နှလုံးအေးချမ်းစွာ ရှင်သန်ရပ်တည်နေနိုင်မှာပါ ရှင် ...
ဒီပုံပြင်လေးကတော့ ဟာသလေးနဲ့ ဆုံးမထားတဲ့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပုံပြင်လေးပါ ပဲရှင် .. လွယ်ကူလွန်းတဲ့ အတွက်သဘောပေါက်လဲ လွယ်ကူလှပါတယ် ဖတ်ကြည့်ကြအုံးနော် ...
"ဂန္ဒီကြီး… ကျွန်မသားလေး က အချိုတွေ သိပ်စားတယ်။ ကျွန်မလဲပြောတာပဲ… မရဘူး။ ကလေးက စားမြဲ စားတာပဲ။ အဲဒါ ဂန္ဒီကြီး ဆုံးမပေးပါအုံးရှင့်" ဆိုပြီး လာပြောတယ်။
အဲဒီတော့မှ ဂန္ဒီကြီးက ကလေးကို ကြင်နာစွာနဲ့ကြည့်လိုက်ပြီး"သားလေး… အချိုတွေ သိပ်မစားနဲ့" လို့ ရိုးရိုးလေးပဲပြောလိုက်တယ် ။
အဲဒီတော့ ကလေးလေး က ရွှန်းရွှန်းစားစား ပြန်ကြည့်ပြီး "ဟုတ်ကဲ့" လို့ပြောလိုက်တယ်။
အဲဒီတော့မှ ဂန္ဒီကြီးက "ငါလည်း အရင်တုံးက အချိုတွေသိပ်စားတယ်… ဒါပေမယ့် အရင်တလက စပြီး ငါအချိုတွေ မစားတော့ဘူး… ရှောင်လိုက်ပြီ… ဒီကလေးကို အချိုမစားနဲ့ လို့ ဆုံးမဖို့ ဆိုတာက ငါက အရင်ဦးဆုံး အချိုမစားတဲ့သူ ဖြစ်ရမယ်။"
ကဲ ... ဘယ်လိုလဲ သူငယ်ချင်းတို့ ရေ ... ပုံပြင်လေးကပြောထားတာတော့ ရှင်းရှင်းလေးပါပဲ ... သူများကို ဆုံးမပြုပြင်ပေးချင်ရင် အရင်ဆုံးကိုကိုတိုင်လည်းပြန်ဆုံးမပြူပြင်ထားပို့ လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းလေးပေါ့ရှင်...
တစ်နေ့မှာ အသည်းကွဲသူတစ်ဦးဟာ ပန်းခြံမှာထိုင်ပြီး ငိုနေခဲ့တယ်။ ဒါကို "ဆိုကရေးတီး"ကတွေ့တော့ "ဘာဖြစ်လို့ ဒီလောက် ၀မ်းနည်းပက်လက် ငိုကြွေးနေသလဲ" လို့ မေးလိုက်တယ်။
အသည်းကွဲသူက "ကျွန်တော့်ချစ်သူ ကျွန်တော့်ကိုထားသွားလို့ အရမ်းခံစားရနေတယ်" လို့ ပြန်ဖြေတယ်။ သူ့အဖြေကို ကြားတာနဲ့ ဆိုကရေးတီးက တဟားဟား အော်ရယ်ပြီး "မင်း တော်တော်တုံးတယ်" လို့ ပြန်ပြောလိုက်တယ်။
အသည်းကွဲသူက ကိုယ့်အဖြစ်ကို လှောင်ရယ်နေတဲ့ ဆိုကရေးတီးကို ဒေါသဖြစ်ပြီး "ခင်ဗျား ဘာရီတာလဲ.. ကျွန်တော်ဒီလောက်ခံစားနေရတာကို မနှစ်သိမ့်တဲ့အပြင် ရီနေရသလား" လို့ ပြောတော့ "မင်းတော်တော်တုံးတယ်။ ဒါကို မင်းဝမ်းနည်းနေစရာ မလိုဘူး။ ၀မ်းနည်းရမှာက မင်းကို ထားသွားခဲ့တဲ့လူကွ.. မင်းကို မချစ်တဲ့ လူတစ်ယောက်ကိုပဲ မင်းဆုံးရှုံးသွားတာ.. သူက သူ့ကိုချစ်တဲ့ လူတစ်ယောက်ကို ဆုံးရှုံးတဲ့အပြင် လူတစ်ယောက်ကိုချစ်တဲ့ စွမ်းရည်တွေပါ ကျသွားတာ" လို့ ဆိုကရေးတီးက ပြန်ဖြေခဲ့တယ်။
တစ်နေ့မှာ နာမည်ကြီးဖာသာတစ်ဦးဟာ ပန်းခြံထဲမှာထိုင်ပြီး ရိုသေကိုင်းရှိုင်းစွာ ဆုတောင်းဝတ်ပြုနေတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ကလေးပျောက်လို့ လိုက်ရှာနေတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦး ထိတ်ထိတ်ပြာပြာနဲ့ အနားကဖြတ်ပြေးသွားတယ်။ အမျိုးသမီးဟာ ကလေးဇောကြောင့် မြေကြီးပေါ်မှာထိုင်ပြီး ဆုတောင်းနေတဲ့ ဖာသာကိုမမြင်ဘဲ တိုက်လိုက်မိတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖာသာကို တောင်းပန်စကား တစ်ခွန်းမှမပြောဘဲ ထွက်သွားခဲ့တယ်။
အတိုက်ခံရတဲ့ ဖာသာဟာ ဒေါသစိတ်ဖြစ်မိတယ်။ ၀တ်ပြုပြီးတဲ့နောက် ကလေးငယ်ကိုတွဲပြီး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ လာနေတဲ့ သူ့ကိုတိုက်သွားတဲ့ အမျိုးသမီးကို မြင်တော့ "ခုနားက မင်းအပြုအမှုကို ရှင်းပြစမ်းပါဦး" လို့ မေးလိုက်တယ်။ ဒေါသတကြီးပြောလာတဲ့ ဖာသာကိုမြင်တော့ အမျိုးသမီးဟာ အနည်းငယ် ထိတ်လန့်သွားခဲ့တယ်။ ပြီးမှ "ခွင့်လွတ်ပါဖာသာ.. အခုနားက ကျွန်မကလေး တစ်ခုခုဖြစ်နေလားဆိုတဲ့ စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ ဖာသာကို သတိမထားလိုက်မိဘူး။ အဲအချိန်တုန်းက ဖာသာလည်း ၀တ်ပြုဆုတောင်းနေတာပဲ မဟုတ်လား? ဆုတောင်းတာကလည်း သတ္တ၀ါအားလုံး အေးချမ်းကျန်းမာဖို့ပဲ မဟုတ်လား..? ဖာသာ ဘာဖြစ်လို့ ကလေးဇောနဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်နေတဲ့ကျွန်မကို မမြင်ခဲ့တာလဲ" လို့ ပြန်ပြောလိုက်တယ်။
Hans Christian Andersen၏ ပုံပြင်များ
တစ်ခါက ရွာတစ်ရွာမှာ ဆင်းရဲသား လင်မယားနှစ်ဦးရှိတယ်။ တစ်နေ့တော့ သူတို့ဟာ ပိုင်ဆိုင်သမျှထဲက တန်ဖိုးအရှိဆုံးဖြစ်တဲ့ မြင်းကိုရောင်းပြီး လိုအပ်တာတွေဝယ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။ ဒီလိုနဲ့ အဘိုးအိုက ဈေးထဲမှာ မြင်းကို နွားတစ်ကောင်နဲ့ လဲလိုက်တယ်။ ခဏနေတော့ အဘိုးအိုက နွားကို ဆိတ်နဲ့ လဲလိုက်ပြန်တယ်။ ဆိတ်ကို ငန်းနဲ့ ငန်းကိုကြက်နဲ့ ကြက်ကို ပန်းသီးတွေနဲ့ လဲလိုက်ပြန်တယ်။ အဘိုးအိုက ပစ္စည်းတစ်ခုကနေ တစ်ခုလဲနေရခြင်း အကြောင်းရင်းက အဘွားအိုကို အံသြမှုတွေ ပေးချင်လို့ပဲဖြစ်တယ်။
အဘိုးအိုဟာ လဲလို့ရတဲ့ ပန်းသီးတွေကို ထမ်းပြီး အိမ်အပြန်လမ်းက အရက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ နားနေတုန်း အင်္ဂလိပ်နှစ်ယောက်နဲ့ ဆုံခဲ့တယ်။ အလာပ သလာပတွေ ပြောရင်း သူလဲခဲ့တဲ့ ပစ္စည်းတွေအကြောင်း ပြောပြတော့ အင်္ဂလိပ်တွေက အဘိုးအိုကို တုံးအတယ်ဆိုပြီး ရီကြတယ်။ အိမ်ပြန်ရောက်ရင် အဘွားအိုရဲ့ အဆူခံရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောတော့ အဘိုးအိုက အဆူခံရမှာ မဟုတ်ကြောင်း ငြင်းပါတယ်။ ဒါကို အင်္ဂလိပ်နှစ်ယောက်က တကယ်လို့ အဘွားအိုရဲ့ အဆူကို မခံရရင် သူတို့မှာပါတဲ့ ငွေတွေပေးခဲ့မယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း လောင်းကြတော့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ ၃ယောက်သား အဘိုးအို အိမ်ကိုရောက်လာခဲ့ကြတယ်။
ပုံပြင်က ရိုးရိုးလေးပါ။ ပုံပြင်ကို ဖတ်စက သူ့ရဲ့ဆိုလိုရင်းကို နားမလည်ခဲ့ဘူး။ စာရေးဆရာက တုံးအတဲ့ ဆင်းရဲသား လင်မယားကို ကဲ့ရဲ့ဝေဖန်ထားတာလား? ဒါမှမဟုတ် လောင်းကြေးငွေတွေ အနိုင်ရအောင် ဇာတ်တိုက်ထားတာလားလို့ တွေးခဲ့မိတယ်။ တကယ်တော့ ပုံပြင်က အိမ်ထောင်တစ်ခုမှာ အခြေခံဖြစ်တဲ့ လင်မယားနှစ်ယောက်ရဲ့ ခွင့်လွတ်သည်းခံခြင်း၊ လေးစားယုံကြည်ခြင်းကို ပြချင်တာပဲဖြစ်တယ်။
ခွင့်လွတ်ခြင်းက အချစ်ရဲ့ ကျောရိုးတဲ့
ပြင်ပလောကမှာ အဘိုးအိုလို တုံးအတဲ့ အပြုအမှုမျိုးက တကယ်မရှိနိုင်ပါဘူး။ လင်မယားနှစ်ယောက်ရဲ့ ချစ်ခင်မှု၊ နားလည်ခွင့်လွတ်မှုတွေက အိမ်ထောင်တည်မြဲဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးနည်းတွေဖြစ်တယ် ။ တစ်ယောက်ရဲ့ အမှားကို တစ်ယောက်က နားလည်ပေးမယ်၊ အပြစ်မမြင်ဘူး ခွင့်လွတ်သည်းခံမယ်ဆိုရင် အိမ်ထောင်ရေးဟာ ပုံပြင်ထဲကအတိုင်း လှပနိုင်ပါတယ်။
လူငယ်တစ်ဦးသည် ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင် အလုပ်စ၀င်လေသည်။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ထဲတွင် သူသည် ပညာအရည်အချင်း အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။
တစ်နေ့တွင် သူသည် နားခိုရာ အဆောင်နောက်ရှိ ငါးကန်တွင် ငါးသွားမျှားလေသည်။ သူ၏ လက်ယာနှင့် လက်ဝဲဘက်တွင် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှစ်ဦးက သူ့ထက် ရောက်နှင့်နေသည်။ သူတို့နှစ်ဦးကို ခေါင်းညိတ်ပြုံးပြပြီး စိတ်ထဲတွင် "ရိုးရိုးဘွဲ့ရထားတဲ့ လူတွေနဲ့ ငါ့မှာ ဆွေးနွေးစရာအကြောင်းမရှိ" ဟု စဉ်းစားမိသည်။
တအောင့်ကြာသော် လက်ယာဖက်လူက ခါးကြောဆန့်ရင်း ငါးမျှားတံကို ချကာ ရေပေါ်လမ်းလျှောက်ပြီး မျက်နှာချင်းဆိုင်ရှိ စည်းရိုးခြားထားသော နားနေဆောင်သို့ အပေါ့အပါးသွားလေသည်။ ထိုလူ ရေပေါ်လျှောက်သွားသည်ကို ကြည့်ပြီး လူငယ်မှာ ကိုယ့်မျက်စိကိုယ် မယုံနိုင်အောင် ဖြစ်မိသည်။ အပြန်တွင် သူသည် ထိုနည်းအတိုင်း ရေပေါ်လမ်းလျှောက်ပြီး ပြန်လာသည်။ လူငယ်မှာ ဘာကြောင့် ရေပေါ်လမ်းလျှောက်နိုင်သည်ကို မေးချင်သော်လည်း "ငါကသူတို့ထက် ပညာတတ်တယ်" ဆိုပြီး ပညာမာန်နှင့် သွားမမေးခဲ့ချေ။
တအောင့်အကြာတွင် လက်ဝဲဘက်လူကလည်း ထိုနည်းအတိုင်း ရေပေါ်လမ်းလျှောက်ပြီး အပေါ့အပါး သွားလေသည်။ "သိုင်းတတ်တဲ့ ကုမ္ပဏီထဲ ငါရောက်နေပါလား.. မဖြစ်နိုင်ပါဘူးလေ" လူငယ်မှာ မူးမေ့မတတ် အံ့သြမိသည်။
ခဏအကြာတွင် လူငယ်မှာ အပေါ့အပါးသွားချင်လာသည်။ ငါးကန်ကိုပတ်ပြီး နားနေဆောင်သို့ (၁၀)မိနစ်ခန့် လမ်းလျှောက်ရဦးမည်။ ထိုသူနှစ်ဦးကိုလည်း မမေးချင်။ အောင့်နိုင်သမျှ အောင့်ပြီး မအောင့်နိုင်သည့်အဆုံး လူငယ်သည် "သူတို့တောင် လုပ်နိုင်သေးရင် ငါက ဘာလို့ မလုပ်နိုင်ရမလဲ" ဟု တွေးပြီး ရေပေါ်သို့ ခြေလှမ်း လှမ်းလိုက်သည်။ လှမ်းလိုက်သည်နှင့် ရေထဲသို့ ပြုတ်ကျသွားလေသည်။ ဘေးက လူနှစ်ယောက်က အမြန်ဆယ်ပြီး ဘယ်လို့ ရေထဲခုန်ချရသလဲဟု မေးလေသည်။
"ခင်ဗျားတို့ကျတော့ ရေပေါ် လမ်းလျှောက်နိုင်တယ် ဘာလို့လဲဟင်" လူငယ်နှစ်ဦးမှာ ရယ်ရင်း "ငါးကန်ထဲမှာ တံတားတစ်ခုရှိတယ်။ ရှေ့နှစ်ရက်က မိုးရွာလို့ တံတားမြုပ်သွားခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်တို့က တံတားနေရာကို သိလို့ အခုလို လျှောက်သွားနိုင်တာပါ။ ဘာဖြစ်လို့ ကျွန်တော်တို့ကို မမေးတာလဲဗျာ" ဟု ပြန်ဖြေလေသည်။
ကျောင်းပြီးလို့ ပြင်ပအလုပ် စ၀င်ပြီချိန်တွင် ဘာနှင့်ပဲ ကျောင်းပြီးခဲ့ပြီးခဲ့ အလုပ်အတွေ့အကြုံ၏ စိန်ခေါ်ခြင်းကို ရင်ဆိုင်ရစမြဲပင်။ ထိုအတွေ့အကြုံများသည် ကျောင်းသင်္ခန်းစာထဲတွင် သင်ယူလို့ မရနိုင်ပေ။ ထိုအတွေ့အကြုံများသည် အမြဲမပြတ် သင်ယူလေ့လာခြင်း၏ ရလဒ်ပင်ဖြစ်သည်။
"သူတို့ထက်ငါ ရာထူးပိုကြီးတယ်။ သူတို့ထက် ငါဘွဲ့ဘယ်နှစ်ခု ရထားတယ်။ သူတို့ထက် ငါစာပိုဖတ်တယ်။ ပိုတော်တယ်။ ........" စသည်ဖြင့် ပညာမာန် တက်နေရာမလိုပေ။ အတွေ့အကြုံရှိသူကို လေးစားပြီး ပညာရှိသူကို ချည်းကပ်ရမည်ပင်။
Published at 1:29 AM in စကားပြေများ...
ဟိုတစ်နေ့က ငါ နင့်ကိုသေချာကြည့်ပြီး ပြုံးပြခဲ့တယ်
နင်မြင်မယ်လို့ ထင်ခဲ့ပေမယ့် မမြင်ခဲ့ဘူး
"ငါ့နင့်ကို ချစ်တယ်" လို့ပြောပြီး နင်ဘာပြန်ပြောမလဲ ငါစောင့်နေခဲ့တယ်
နင်ကြားမယ်လို့ ထင်ခဲ့ပေမယ့်၊ နင်မကြားခဲ့ဘူး
ငါ့နဲ့အတူ ဆော့ကစားဖို့ နင့်ကိုခေါ်ခဲ့ဖူးတယ်
နင်လိုက်လာမယ် ထင်ခဲ့ပေမယ့်၊ နင်ကတော့ ပါမလာခဲ့ဘူး
နင်တစ်ယောက်ထဲအတွက်ပဲ ငါပန်ချီကားတစ်ချပ် ဆွဲပေးခဲ့ဖူးတယ်
နင်မြတ်မြတ်နိုးနိုး သိမ်းထားမယ်လို့ ထင်ခဲ့ပေမယ့်၊ နင်မလုပ်ခဲ့ဘူး
တောအုပ်က အပြန်မှာ နားနေဖို့ ခံတပ်တစ်ခု ငါဆောက်ခဲ့တယ်
နင် ငါနဲ့အတူ စခန်းချနေမယ် ထင်ခဲ့ပေမယ့်၊ နင်မနေခဲ့ဘူး
ငါတို့ငါးမျှားထွက်ရင် အသုံးပြုဖို့ တီကောင်တွေ ငါရှာဖွေခဲ့တယ်
ငါနဲ့အတူ နင်လိုက်ချင်မယ် ထင်ခဲ့ပေမယ့်၊ နင်မလိုက်ခဲ့ဘူး
ငါ့ရဲ့အတွေးတွေကို နင့်ကိုပြောပြပြီး ငါနဲ့အတူ နင့်ကိုမျှဝေခံစားစေချင်ခဲ့တယ်
နင်နားထောင်ချင်မယ် ထင်ခဲ့ပေမယ့်၊ နင်နားမထောင်ခဲ့ဘူး
ငါ့ရဲ့ ငယ်ရွယ်နုပျိုချိန်တွေကို နင်နဲ့အတူ ကုန်ဆုံးချင်ခဲ့ဖူးတယ်
ဒါပေမယ့် နင်ကတော့ ငါထင်သလိုဖြစ်မလာခဲ့ဘူး
တိုင်းပြည်အတွက် ငါစစ်ထွက်တဲ့အခါ၊ ငါ့ကိုအိမ်ဆက်ဆက်ပြန်ခဲ့ဖို့ နင်ပြောခဲ့တယ်
Published at 1:26 AM in ဟာသ အတိုများ..
> ဆေးရုံအုပ်.... "မနက်ဖြန်က အရေးကြီးတဲ့နေ့ တစ်နေ့နော်။ ဘာလို့လဲ သိလား? နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲ လာစစ်ဆေးလိမ့်မယ်။ လာစစ်ဆေးပြီး ငါက "အဟမ်း" လို့ ချောင်းဟန့်လိုက်ရင် မင်းတို့အားလုံး လက်ခုပ်တီးရမယ် ကြားလား.. လက်ခုပ်တီးတဲ့လူကို အသားဟင်းကျွေးမယ်"
> နောက်တစ်နေ့ ....
> နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲ လာရောက်စစ်ဆေးခဲ့သည်။ မိန့်ခွန်းပြောအပြီးတွင် ဆေးရုံအုပ်က ကြိုတင်မှာကြားထားသည့်အတိုင်း ချောင်းဟန့်လိုက်သည်နှင့် လူနာအားလုံး လက်ခုပ်တီးကြသည်။ ထိုအချိန်တွင် လူနာတစ်ယောက်က ရုတ်တရက်ရှေ့ထွက်ပြီး အကြီးအကဲကို ပါးတစ်ချက်ရိုက်လိုက်ပြီး ပြောလိုက်သည်မှာက "မင်းဘာလို့ လက်ခုပ်မတီးတာလဲ? အသားဟင်း မစားချင်ဘူးလားကွ" ဟူတည်း။
> ကျောင်းသားတစ်ဦးသည် ဆရာမတစ်ဦးကို တိတ်တခိုး နှစ်သက်စွဲလမ်းနေမိသည်။ တစ်နေ့တွင် အရဲစွန့်ပြီး ဆရာမကို ချစ်ကြိုက်ကြောင်း ရင်ဖွင့်ခဲ့သည်။ ဆရာမက ကျောင်းသားနှင့် ဆရာမှာ မချစ်သင့်ကြောင်း၊ မယူသင့်ကြောင်း အမျိုးမျိုးပြောဆိုဆုံးမခဲ့သော်လည်း ကျောင်းသားက အချစ်တွင် အသက်အရွယ်၊ ရာထူးဂုဏ်သိက္ခာ မခွဲခြားကြောင်းပြောပြီး တစ်ဇွတ်ထိုး ရှေ့တိုးခဲ့သည်။
> ဆရာမက မတတ်တာသည့်အဆုံး မင်းလို ကလေးကို ငါမချစ်နိုင်ဘူးဟူသည့်သဘောဖြင့် "ဆရာမ ကလေးမလိုချင်ဘူး" ဟုပြောလိုက်ရာ ကျောင်းသားပြန်ပြောလိုက်သည်မှာက "ကလေးမရအောင် ကျွန်တော်သတိထားပြီး လုပ်ပါ့မယ်" ဟူတည်း။
> တစ်ခါက လှေတစ်စင်း မြုပ်လုနီးနီးမှာ ရဟတ်ယာဉ်တစ်စီး လာကယ်ခဲ့တယ်။ ရဟတ်ယာဉ်ပေါ်က ကြိုးတစ်ချောင်းကို ပစ်ချပြီးကယ်တော့ ယောကျာ်း၁ဝယောက်နဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်က အဲဒီကြိုးမှာ ပါသွားခဲ့တယ်။ ကြိုးမှာချိတ်နေတဲ့ လူ၁၁ယောက်ကို ရဟတ်ယာဉ်က မနိုင်ဘဲဖြစ်နေလို့ လူတစ်ယောက် လက်လွှတ်ပေးရမယ်ဆိုတော့ ယောကျာ်းတွေက လက်မလွှတ်ချင်ကြဘူး။ က "အားလုံးအတွက် ကျွန်မ အနစ်နာခံပါ့မယ်။ ကိုယ့်ယောက်ျားအတွက်၊ ကိုယ်ရင်သွေးတွေအတွက် ပေးဆပ်တာကို မမျှော်ကိုးဘဲ အမြဲစွန့်လွှတ် အနစ်နာခံနေရတဲ့ ကျွန်မတို့ မိန်းမသားတွေအတွက် ဒါမျိုးက ရိုးနေပါပြီ.. "လို့ အော်ပြောလိုက်တယ်။ အမျိုးသမီးလဲ ပြောပြီးရော ယောကျာ်းတွေ အားလုံး လက်ခုပ်ဝိုင်းတီးကြတော့တယ်..
> လူတစ်ယောက်ဟာ နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲကို "အသုံးမကျတဲ့လူ" လို့ ပြောလို့ အဖမ်းခံရသတဲ့။ ရုံးတင်စစ်ဆေးပြီးနောက် တရားသူကြီးက သူ့ကို ထောင်ဒဏ် ၁၀နှစ်နဲ့ ၆ရက် အမိန့်ချလိုက်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့ ဒီလောက်ကြီးလေးတဲ့ အပြစ်ကိုပေးရသလဲလို့ မေးတော့ တရားသူကြီးက " ပြစ်ဒဏ် ၆ရက်က နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲကို စော်ကားတဲ့အတွက် ပြစ်ဒဏ် ၁၀နှစ်က နိုင်ငံတော်ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကို ဖော်ကောင်လုပ်တဲ့အတွက်" လို့ ပြောလိုက်သတဲ့။
> တစ်ခါက နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲ ခေါင်းဆောင်သုံးဦးဟာ ရဟတ်ယာဉ်စီးပြီး နိုင်ငံအခြေအနေကို လှည့်လည်ခဲ့တယ်။
> ပထမ အကြီးအကဲ " တကယ်လို့ အခုချိန်မှာ ငါသာ ငွေတစ်ထောင်တန်တစ်ရွက် ပစ်ချလိုက်ရင် ကောက်ရတဲ့လူက အရမ်းပျော်မှာပဲ"
> ဒုတိယ အကြီးအကဲ " တကယ်လို့ ငါသာ ၅၀၀တန်နှစ်ရွက် ပစ်ချလိုက်ရင် လူနှစ်ယောက်ပျော်ရမယ်"
> တတိယ အကြီးအကဲ "တကယ်လို့ ငါသာ ၁၀တန်ဆယ်ရွက် ပစ်ချလိုက်ရင် လူဆယ်ယောက် ပျော်ရမယ်"
> သူတို့အချင်းချင်း ပြောနေတဲ့ စကားကိုကြားတော့ လေယာဉ်မှုးက အခုလို ပြောလိုက်သတဲ့...
> "အကြီးအကဲတို့ သုံးဦးလုံးသာ ခုန်ချလိုက်ရင် နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ လူတွေအားလုံး ပျော်ကြမှာပဲ" ဟူတည်း။
> တစ်ခါက လူတစ်ယောက်ဟာ မိတ်ဆွေတစ်ဦးရဲ့ အဘွားနေမကောင်းတာကို သတင်းမေးဖို့ ရောက်သွားခဲ့တယ်။ သတင်းမေးနေတုန်းမှာ သူက စားပွဲခုံပေါ် တင်ထားတဲ့ မြေပဲဆံတွေကို ယူစားတော့တယ်။ သတင်းမေးပြီး အိမ်ပြန်ခါနီး အဘွားကို မြေပဲဆံတွေအတွက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောတော့ အဘွားက "အေး.. အဘွားလဲ အသက်ကြီးတော့ မ၀ါးနိုင်တော့တာနဲ့ အဲဒီမြေပဲဆံ အပြင်က ကပ်ထားတဲ့ ချောကလက်တွေလောက်ပဲ စုပ်စားနိုင်တော့တယ်ကွဲ့" ဟူတည်း။
> ကင်ဆာရောဂါနဲ့ သေတော့မယ် လူတစ်ယောက်ကို သားဖြစ်သူက
> "ကင်ဆာရောဂါ ဖြစ်နေတာကို ဘာဖြစ်လို့ သတင်းလာ မေးသူတိုင်းကို အေအိုင်ဒီအက်စ် ဖြစ်နေတယ်လို့ ပြောရတာလဲ ဖေဖေ" လို့ မေးတော့ အဖေဖြစ်သူ ဖြေလိုက်တာက
> "ဒါမှ ငါသေသွားရင် မင်းအမေကို တစ်ခြားလူ မကြံမှာပေါ့ကွ" ဟူတည်း။
> တစ်ခါက သဲကန္တာရမှာ ဆာလောင်ပြီး သေလုနီးနီး ဖြစ်နေတဲ့ လူမဲတစ်ယောက်ဟာ နတ်မီးခွက်တစ်လုံး ကောက်တွေ့သတဲ့။ မီးခွက်ကို ပွတ်လိုက်တော့ မီးခွက် စောင့်နတ်က ထွက်လာပြီး လိုရာဆု သုံးဆုကို တောင်းခိုင်းလိုက်တယ်။ သူက ခဏလောက် စဉ်းစားပြီး
> (၁) နေ့တိုင်း ရေသောက်ရပါစေ
> (၂) လူဖြူတစ်ယောက် ဖြစ်ရပါစေ
> (၃) နေ့တိုင်း ကောင်မလေးတွေရဲ့ တင်ပါးကို မြင်ရပါစေ
> လို့ ဆုတောင်းလိုက်တာနဲ့ ဘုန်းဆိုတဲ့ အသံနဲ့အတူ အဲဒီလူမဲဟာ......
> အိမ်သာအိုးတစ်လုံး ဖြစ်သွားသတဲ့။
> တရုတ်နဲ့ ဂျပန်
> ကမ္ဘာစစ်က ရန်ငြိုးတွေကြောင့် တရုတ်နဲ့ဂျပန် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် အမြင်မကြည်ကြဘူးလို့ အလုပ်က ပြည်ကြီးတရုတ် သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်က ပြောပြဖူးတယ်။ ဘယ်လောက်ထိတောင် အမြင်မကြည်လဲဆို တရုတ်နာမည်ကြီး ဘတ်စကက်ဘောသမား "Yao Ming"ဆိုရင် ဂျပန်က ကမ်းလှမ်းတဲ့ ကြော်ငြာတွေကို ဘယ်တော့မှ လက်မခံပါဘူးတဲ့။ ဒါဆိုရင် မနှစ်က ဂျပန်ကား ရိုက်သွားတဲ့ နာမည်ကြီး တရုတ် မင်းသမီး"Zhang Ziyi " ရောလို့ ကျွန်မ မေးတော့ အဲဒီမင်းသမီးကို ပြည်ကြီးက တရုတ်တွေ မကြိုက်တဲ့အကြောင်း သူပြောပြတယ်။
> နောက်ပြီး သူဆက်ပြောသေးတယ်။ တစ်ခါက တီဗွီ အစီစဉ်တစ်ခုမှာ ကမ္ဘာကျော် တရုတ်မင်းသား "ဂျက်လီ"နဲ့ ထိုင်ဝမ် အဆိုတော် တစ်ယောက်ကို ဂျပန်သတင်းထောက်က အင်တာဗျူးလုပ်သတဲ့။ အင်တာဗျူးမှာ သတင်းထောက်က အဆိုတော်ကို "ကမ္ဘာစစ်တုန်းက ဂျပန်တွေက တရုတ်လူမျိုး သန်းပေါင်းများစွာကို သတ်ခဲ့တယ်လို့ ပြောတယ်။ အသတ်ခံရတဲ့ အရေအတွက်ကို ခင်ဗျားတို့က လိုက်ရေထားလို့လား" လို့ မေးတော့ အဆိုတော်က ဘာပြန်ဖြေရမှန်း မသိဖြစ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ မင်းသား ဂျက်လီက ရုပ်ရှင်ထဲက သူ့ရဲ့ ကန်ချက် ထိုးချက်အတိုင်း လျှင်မြန်တဲ့ အတိမ်းအရှောင်နဲ့ အခုလို ဖြေလိုက်ပါသတဲ့။ "ကမ္ဘာစစ်တုန်းက အမေရိကားစစ်သားတွေ ဂျပန်အမျိုးသမီးတွေကို မုဒိန်းကျင့်ခဲ့တယ်လို့ ပြောတယ်။ ခင်ဗျားတို့က အဲဒီမုဒိန်းကျင့်ခံရတဲ့ အမျိုးသမီးတွေကို ဖရီးလာလားလို့ မေးခဲ့လား" လို့ ပြန်မေးလိုက်မှ သတင်းထောက်ကြီး ဆွံအသွားသတဲ့။ တီဗွီထဲကရော တီဗွီအပြင်မှာရော ကြည့်နေကြတဲ့ ပြည်ကြီး တရုတ်တွေက လက်ခုပ်လက်ဝါး တဖြောင်းဖြောင်း တီးလို့ပေါ့။
> တစ်ခါက အမေရိကန်လူမျိုး၊ အင်္ဂလိပ်လူမျိုး၊ တရုတ်လူမျိုးနဲ့ ဂျပန်လူမျိုးတို့ဟာ သူနိုင်ငံ ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့ စစ်ရေးစစ်ရာကို ဆွေးနွေးကြတယ်။
> ဂျပန်လူမျိုးက "ကျွန်တော်တို့ လူမျိုးက မတွန့်မကြောက် သတ္တိခဲတွေ နိုင်ငံအတွက်ဆိုရင် အသက်ကိုတောင် စွန့်ဝံ့တယ်။ အခု ကျွန်တော်ခေါင်းပေါ်မှာ ပန်းသီးတစ်လုံးတင်ပြီး ခင်ဗျားတို့ရဲ့ အပစ်ကို ခံရဲတယ်" လို့ ပြောပြီး သူ့ခေါင်းပေါ် ပန်းသီးတစ်လုံးတင်ပြီး ကျန်လူတွေကို သေနတ်အပစ် ပြိုင်ခိုင်းလိုက်တယ်။
> ပထမဦးဆုံး အမေရိကန်လူမျိုးက နောက်ကို ခြေအလှမ်း၂၀ လှမ်းပြီး ကိုယ်ကိုလှည့်ပြီး ပစ်ထည့်လိုက်တယ်။ ဂျပန်ခေါင်းပေါ်မှာ တင်ထားတဲ့ ပန်းသီးလေး အစိတ်စိတ် အမွှာမွှာ ကွဲသွားတယ်။ အမေရိကန်က သေနတ်ပြောင်းဝက မီးခိုးကို တစ်ချက်မှုတ်ပြီး ပြောလိုက်တယ်.. "I am Hunter" ငါက မုဆိုးတဲ့။
> ဒုတိယ အင်္ဂလိပ် လူမျိုးက နောက်ကို ခြေအလှမ်း ၅၀လှမ်းပြီး ကိုယ်ကို တစ်ပတ်လှည့်ပြီး ပစ်လိုက်ပြန်တယ်။ ပန်းသီးက ဖွာခနဲ့ပဲ။ အင်္ဂလိပ်က ကိုယ့်ကို အထင်ကြီးတဲ့ ပုံစံနဲ့ ပြောလိုက်တယ်.. "I am Bond" ငါက ဂျိမ်းစ်ဘွန်းတဲ့။
> နောက်ဆုံး တရုတ် အလှည့်ရောက်တော့ တရုတ်က နောက်ကို ခြေ ၃လှမ်း လှမ်းပြီး ပစ်ထည့်လိုက်တယ်။ ဖြာခနဲ့ပဲ ပန်းသီးတော့ မဟုတ်ဘူး။ ဂျပန်ရဲ့ ဦးခေါင်းပါ။ တရုတ်က ဟန်ပါပါနဲ့ ခါးထောက်ပြီး ပြောလိုက်တယ်။ "I am sorry" ငါဝမ်းနည်းပါတယ်တဲ့။
> တခါက အမေရိကန်သမ္မတရယ် ၊ တရုတ်သမ္မတရယ် ၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဘဘကြီးရယ် ထာဝရဘုရား သခင်ကို သွားတွေ့ကြသတဲ့။
> ထာဝရဘုရားသခင်က သင်တို့သိလိုရာကို မေးကြပါဆိုတော့ တယောက်ပြီးတယောက် မေးကြတော့တာပေါ့။
> ပထမဆုံး အမေရိကန်သမ္မတက မေးတယ်။
> `ဘယ်တော့များမှ အမေရိကန်နိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးကို နိုင်ငံရေး ၊ စစ်ရေးအရ ပြိုင်ဘက်မရှိ လွှမ်းမိုး နိုင်မှာလဲ´တဲ့။ ထာဝရဘုရားသခင်က ခေတ္တခန့်စဉ်းစားပြီး ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။
> `ဖြစ်တော့ဖြစ်မယ်။ ဒါပေမယ့် မင်းမမှီတော့ဘူး´တဲ့ ။ အမေရိကန်သမ္မတလည်း ထာဝရဘုရားသခင် အဖြေ ကိုကြားပြီးနောက် ငိုပါလေရော။
> တရုပ်သမ္မတကလဲ ထာဝရဘုရားသခင်ကို `ဘယ်တော့များမှ တရုပ်ပြည်ဟာ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးတစ်ခုလုံးကို လွှမ်းမိုးနိုင်မှာလဲ´တဲ့။
> ထာဝရဘုရားသခင်က ခုနလိုပဲ ခနစဉ်းစားပြီး ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။ `ဖြစ်တော့ဖြစ်မယ်။ ဒါပေမယ့် မင်းမမှီ တော့ဘူး´တဲ့ ။ တရုပ်သမ္မတလဲ ငိုပြန်ပါလေရော။
> နောက်ဆုံး ကျူပ်တို့ရဲ့ ဘဘကြီးက အားကျမခံ ထာဝရဘုရားသခင်ကို မေးလိုက်တယ်။ သူ့မေးခွန်း လဲကြားပြီးရော ထာဝရဘုရားသခင်က ငိုပါလေရော။ သူမေးတာက `ဘယ်တော့များမှ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ မီးတွေ ရေတွေ မှန်မှာလဲ´တဲ့။
> မျက်ရည်လည်ရွှဲကြားက ထာဝရဘုရားသခင်က ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။
> `ဖြစ်တော့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ငါမမှီတော့ဘူးတဲ့´ .... ။
> တမလွန်ဘ၀မှာ ဂျော့ဘုခ်ျရယ် ၊ ကျွန်တော်တို့ဘဘကြီးရယ် ၊ ဗလာဒီမင်ပူတင်ရယ် အတူတူတွေ့ပြီး လမ်းလျှောက်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့တစ်နေရာ အရောက် လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ ကားစင်အတင်ခံထားရတဲ့ ယေရှုခရစ်တော်နဲ့ တွေ့ပါလေရော။ အဲဒီမှာတော့ ဂျော့ဘုခ်ျက ယေရှုနားကို တိုးသွားပြီးတော့
> `အရှင် ၊ သားတော်အသက်ရှင်ခဲ့တဲ့ဘ၀မှာ သားတော်က ကံကောင်းခဲ့ပါသလား´ လို့မေးလိုက်တယ်။
> ယေရှုက `အေး သားတော်ကံကောင်းပါတယ်။ မင်းက အကြမ်းဖက်သမားတွေကို နှိမ်နင်းနိုင်ခဲ့လို့ပဲ´ဆိုပြီး ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။
> ပူတင်လဲ ယေရှုနားတိုးကပ်သွားပြီး `ကျွန်တော်မျိုးကော အသက်ရှင်စဉ်က ဘယ်လိုကံကောင်းခဲ့ပါသလဲ´လို့ မေးလိုက်ပြန်တယ်။ ယေရှုက `မင်းလဲ ကံကောင်းခဲ့တာပဲ ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မင်းက တိုင်းပြည်ကို စိတ်တိုင်းကျ ပုံဖော်နိုင်ခဲ့လို့ပဲ´ဆိုပြီး ဖြေလိုက်ပါတယ်။
> နောက်ဆုံး ဘဘကြီးကလဲ အားကျမခံဘဲ ယေရှုနားသွားပြီး `ကျွန်တော်ရော ဘယ်လို ကံကောင်း ခဲ့ပါလဲ´လို့မေးလိုက်တယ်။ အဲဒီလို မေးလိုက်တဲ့ခဏမှာ ယေရှုရဲ့လက်နှစ်ဖက်လုံး လှုပ်သွားတယ်။ ဒါပေမယ့် ကားစင်တင်ခံထားရတာဆိုတော့ ယေရှုက လှုပ်လို့မရဖြစ်နေတယ်။ ပြီးတော့ ဘဘကြီးကို အံကျိတ်ပြီးပြောလိုက်တယ်။
> `အေး .. ငါ့လက်နှစ်ဖက်လုံး လှုပ်မရတာ မင်းကံကောင်းတယ်မှတ်´ တဲ့။
Published at 12:51 AM in ကဗျာ
အခွင့်ကြုံလို့ ... ပြန်ဆုံခွင့်ရမည်ဆိုလျှင်......
မင်းမျက်ဝန်းတွေ က ခြောက်ကပ်ကပ်နဲ့
အလွမ်းကောင်းကောင်း အင်္ကျီတစ်ထည်တောင်
` ခင်မင်မှုနဲ့ချစ်ခြင်းကို
ဂဃနဏ မသိပဲနဲ့ 
ငါးစာချ ခံ ရလို့ 
ဈေးဝယ်မိလို့လိုက်ပို့ ရတယ်။
တနင်္ဂနွေ နေ့ မှာ
ထိုင် ထ လုပ်တယ်။
ဒုက္ခနဲ့ စာရင်းရှင်းဖို့ 
ဗမာ့နည်း ဗမာ့ဟန်နဲ့ 
၀ လာမလားလို့ 
ကောင်လေးက ကောင်မလေးကို ဓါးနဲ့ ထိုးလို ကောင်မလေးသေခဲ့ရ
Published at 12:39 AM in ဇါတ်လမ်းတိုလေးမှား
News ကောင်လေး နဲကောင်မလေး စကားများရင် ကောင်လေးက ကောင်မလေးကို ဓါးနဲ့
GTC ကျောင်းမှာ အလွန်သိပ်ချစ်တဲ့ ကောင်မလေး နဲ့ ကောင်လေး
အတွဲတစ်တွဲရှိတယ် . အဲဒီကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေး ဟာ
အရမ်းချစ်ခဲ့တယ်လိုသိရပါတယ် ။ တစ်နေကောင်လေးမှာ ဆေးစွဲတယ် ။ ဒါကို
ကောင်မလေးက သိတော့ ဆေးကို ဖျက်ဖို့ပြောတယ် ။ကောင်လေး ကသူစကားနားထောင်
မယ်လိုပြော တယ် ။ ဒါဘင်မဲ့အကြိမ်ကြိမ်ပြောခဲ့ဘင်
မဲ့ မရ ဘူး ဖြစ်နေတယ်တဲ့ ။ တစ်နေ့သူမ က ကောင်းလေးကို မေးတယ် "နင် ဆေးကို
ဖျက်မှာလား ။ ငါ့ကို ဖျက်မှာလား" လိုမေးတော့
"ငါ နင်စကားကို နားထောင် မယ် ငါ ဆေးဖျက်ပါမယ် " လို
ဒါဘင်မဲ့ကောင်လေး က ဆေးမဖျက်နိုင်ခဲ့ရှာဘူး ။ဒါကြောင်ကောင်မလေး က
ကောင်လေးကိုဖျက်ပြီတော့ နောက်တစ်ယောက်နဲ့တွဲသွားခဲ့တယ်။ ဒါကို
အရင်ကောင်လေက သိတော့ ကောင်မလေး ကို လာပြောတယ် ။ နင် အခုတွဲနေတဲ့ကောင်ကို
ဖျက်ပါ .. ကောင်မလေးက မဖျက်နိုင် ကြောင်း နင် က နင့်အကျင်ကို မပြင်လို့
တွဲခဲကြောင်ပြောကြတယ် ဒီလို နဲ့ ဆွေးနွေ ရင် ကောင်လေး က ကောင်မလေးကို
ပြောမရတဲ့အဆုံး ဓါးနဲထိုးသတ်ခဲ့တယ် ။
ပြီတော့ အလောင်းကို လုံခြုံတဲ့နေရာမှာ ဖွက်ထား တယ်တဲ့ ။ ဒါဘင်မဲ့
ဖြစ်ချင်တော့ အဲဒီနေ့မှာ (ကောင်မလေးနဲ့တွေ့တဲ့နေမှာ အဖြုရောင်အကျီင်္ကို
၀တ်သွားခဲ့မိလို) ကောင်လေး က ကောင်မလေး ကို သတ်တုံ့း ကောင်မလေးရဲ့သွေးတွေ
ကောင်လေ အင်္ကျီ အဖြုပေါ်ကို စွန်းခဲ့တယ်တဲ ။ ဒီလိုနဲ့ ကောင်လေက ဘယ်သူမှ
မသိအောင် အလောင်းကို ဖွက်ပြီတော့ အိမ်ပြန်ခဲ့တယ် အဲဒီအကျီင်္ကိုလဲ သေချာ
သိမ်းပြီ အိမ်ပါလာတယ်လိုသိရတယ် ။ အဲဒီကောင်လေးက ဘယ်သူမ မသိအောင် အကျီင်္ကို
ဗီယိုထဲမှာ ထည့်သိမ်းထားလိုက်တယ်တဲ့ .....
ညကောင်လေး က စိတ်မောမောနဲ့အိပ်တော့ ကောင်မလေးက
ကောင်မလေး၊၊ ၊၊ ငါနင့်ကို အရမ်းချစ်ခဲ့တယ် ။ဒါကြောင့် ငါနင်ကို ဒုတ်ခ
ရောက်အောင်မလုပ်ချင်ဘူး ဒါကြောင့် အဲဒီနေ့က နင်ဝတ်ခဲ့တဲ့ အကျီင်္ အဖြု မှာ
စွန်းနေတဲ့ ငါ့သွေးကို နင် ပြောင်အောင် လျှော်ပါ ။ တကယ်လို
မပြောင်ဘူးဆိုရင် နင် ဒုတ်ခရောက်လိမ့်မယ် ။
ကောင်လေးဟာ အိမ်မက်ကနေလန့်နိုးလာပြီတော့ ဗီယိုထဲက အကျီင်္ကို ထုတ်ပြီတော့
ပြောင်အောင်လျှော်တယ်တဲ့ ဆပ်ပြာမှုန်များများ ရေနွေးစိမ်ပြီတော
့အကြိမ်ကြိမ် လျှော် ပါလေ ရော ဒါဘင်မဲ့မပြောင်ခဲကြောင်းသိ၇တယ် ။
ဘယ်လိုဘဲလျှော်လျှော် အဲဒီ အဖြုရောင် အင်္ကျီမှာ စွန်းနေတဲ့ သွေးကို
ကောင်လေးတော်တော်ကို စိတ်ညစ် ပြီ ပူထူပါလေရော ဒါနဲ့ အင်္ကျီကို
နောက်တစ်နေည ကြတော့ ကောင်မလေးအိမ်မက်လာပေးပြန်တယ်တဲ့ .
ပြောင်အောင်လျှော်ဖို ရယ် အချိန်သိပ်မကျန်တော့တဲ့အကြောင်း ။တကယ်လို အဲဒီ
အကျီကို ပြောင်အောင်မလျှော်နိုင်ရင် သက်သေခံဖြစ်သွားမဲ့အကြောင်း
အဲလိုနဲ့ မနက်မိုးလင်တော့ မနက်တိုင်း ဆွမ်းခံကြွတဲ့ ကိုယ်တော်
(တန်ခိုကြီးတဲ့ ကိုယ်တော်တပါးလို့သိရပါတယ်။) ကြွလာတော့ ကိုယ်တော် က
အဲကောင်လေး ကို ခေါ်ပြီတော့ ပြောတယ်တဲ့ "တကာကြီးဆီမှာ သက်သေခံ ပစည်း
တစ်ခုရှိတယ်မလား တဲ့ အဲဒီပစွည်း ကြောင် တကာ ကြီး ဒုတ်ခ ရောက်လိမ့်မယ် "
လိုပြောသွားရော ။ ဒါနဲ့ကောင်လေး က အရမ်းလန့်သွားပြီ အဲဒီအ၀တ်ကို
ထပ်သွားရော်တယ်တဲ့ .. ဘယ်လိုလျှော်လျှော် မပြောင်ဘူးဘဲဖြစ်ဖြစ်နေတယ် ။
နောက်ဆုံ မရတော့ ဗီယိုထဲပြန်ထားပြီ အနားယူတယ် တဲ
ညရောက်တော့ ကောင်လေး အိမ်မက်ထဲကို ကောင်မလေး ရောက်လာတယ်
"ဘယ်လိုလဲ နင်ကိုချစ်လွန်းလိုနင် ဒုတ်ခမရောက်အောင် ငါကိုသတ်တဲ့သူကို
ကူညီနေဒါ နင် ပြောင်အောင်လျှော်နိုင်ရဲ့လား" လို မေးတယ်တဲ ကောင်လေးက
မလျှော်နိုင်ကြောင်း ထပ်ပြောတော့ ။ ကောင်မလေး က ပြန်ပြောတယ် "နင် က
ဘယ်လိုလုပ် ပြောင်အောင် လျှော်နိုင်မှာလဲ Oki ဆပ်ပြာမှုန့် နဲ့ မှ
မလျှော်ဒါ" လို ပြောတယ်တဲ့
Published at 12:37 AM in ဟာသ အတိုများ..
"မိကျောင်းနှစ်ကောင် ပျံသွားတယ်။ တကောင်က အစိမ်းရောင်၊ နောက်တကောင်က
အာဖရိကတိုက်ဘက်ကို ပျံသွားတယ်၊ ဆရာ့အသက် ဘယ်လောက်လဲ"
"ကျနော် အသက် ၁၂ နှစ်ရှိပါပြီ။ ပြီးတော့ ကျနော်ကို ဦးနှောက်တ၀က်
ချောင်တဲ့ကောင်လို့ အားလုံးက ပြောကြတယ်လေ"
ဒီစကားမျိုးပြောမှာ မဟုတ်ဘူး ဟင်းးးး"
တစ်ကြိမ်တည်းနှင့် မည်သည့် တပ်မတော်သားက အများဆုံး စားနိုင်သလဲ ဆိုသည်ကို
ပထမဆုံး ဗလကောင်းကောင်းနှင့် အမေရိကန်စစ်သား ထွက်လာသည်။
ပြင်သစ်စစ်သားထွက်လာသည်။ ပေါင်မုန့် သုံးလုံး စားနိုင်သည်။ နောက်ထပ်
ဂျာမန်စစ်သား အလှည့်ရောက်လာသည်။ ပေါင်မုန့်လေးလုံးခွဲ ကုန်အောင်
မြန်မာစစ်သား ထွက်လာသည်။ တလုံးကုန်အောင်မပြောနှင့် လေးပုံတပုံတောင်
ဌင်းစစ်သားကို ပြိုင်ပွဲဝင်ရန်စေလွှတ်သည့် တာဝန်ခံအရာရှိအား
ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးက ခေါ်ပြီး ကြိမ်းမောင်းသည်။
"ဘယ်လိုကောင်မျိုးကို မင်းလွှတ်လိုက်သလဲကွ။ ငါလို အသက်ကြီးတဲ့ လူတောင်
ကြိုးစားစားရင် တလုံးတော့ ကုန်နိုင်ပါတယ်ကွ"
"ဒီတပ်သားဟာ အခုလိုဖြစ်သွားတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျနော်လဲ မစဉ်းစားတတ်အောင်
ဖြစ်ရပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲ မစတင်မီ ၁၀ မိနစ်အလိုမှာ ကျနော်တို့ သူ့ကို
ကြိုတင်လေ့ကျင့်ခိုင်းတုန်းကတောင် တခါတည်းနဲ့ ၁၂လုံးကုန်အောင်
စစ်အရာရှိကြီးသည် စစ်သားမှားနေထိုင်သော သုံးထပ်တိုက်အဆောင်ကိုဖြတ်လျှောက်လာသည်။
စောစောကပျော်ရွှင်နေသောစိတ်လုံးဝပျောက်သွားသည်။ ရှုံမဲ့ပြီး ရေကျလာသည့်သုံးထပ်တိုက်ပြတင်းပေါက်ဘက်သို့မော့ကြည့်သည်။မည့်သူကိုမှမမြင်ရချေ။
အားပါးတရကြည့်ပါစေဟူသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဘယက်ကိုချွတ်ပေးသည်။စိန်ဘယက်သည် တစ်လက်မှတစ်လက်သို့ကူးသွားသည်။နောက်ဆုံးတွင်စိန်ဘယက်ပျောက်သွားတော့သည်။
အိမ်ရှင်ကစိတ်မကောင်းဖြစ်ရသော အသံဖြင့်ပြောသည်။ ``ကျီစားတာဆိုရင်လွန်သွားပြီဗျာ။အခုစားပွဲပေါ်ကိုကျွန်တော်ငွေဖလားတင်ထားမယ်။
မီးခလုတ်ကိုပိတ်လိုက်ပြီးတစ်ရာထိကျွန်တော်ရေမယ်။မီးကိုပြန်ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ စိန်ဘယက်ကို ငွေဖလားထဲမှာပြန်တွေ့ရမယ်လို့ မျှော်လင့်ချင်ပါတယ်။ မီးကိုပြန်ဖွင့်လိုက်သည်....
တစ်နေ့ အ.လ.က ကျောင်းတစ်ကျောင်းတွင် ဆရာမတစ်ဦးသည်သူမ၏ တပည့်တစ်ယောက်ကိုခေါ်ပြီးမေးခွန်းမေးခဲ့သည်
ဆရာမ ။ ။ သားသစ်ကိုင်းတစ်ကိုင်းပေါ်မှာ ငှက်လေးကောင်နားနေတယ်တစ်ကောင်ကိုသေနတ်နဲ့ပစ်လိုက်ရင်သစ်ကိုင်းပေါ်မှာငှက်ဘယ်နှစ်ကောင်ကျန်မလဲ ?
တပည့် ။ ။ တစ်ကောင်မှမကျန်ပါဘူး ဆရာမ ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သေနတ်သံကြောင့် ငှက်တွေကထပျံသွားလို့ပါ
ဆရာမ ။သားအဖြေကမှားတယ်ကွဲ့ ငှက်ကလေးကောင်ကျန်ရမယ် ။ဒါမေမယ့်ဆရာမ သားအတွေးအခေါ်ကို
တပည် ။ ။ ဆရာမ သားဆရာမကို မေးခွန်းတစ်ခုထပ်မေးမယ်နော် ။
ဆရာမ ။ ။ အင်းမေးလေ သားရဲ့ ။
တပည့် ။ ။ ကန်ဘောင်ဘေးမှာ မိန်းမသုံးယောက်ရေခဲ့မုန်းစားနေတယ် သူတို့တွေထဲမှာ
၁ ယောက်က ရေခဲမုန့်ကို ကိုက်စားတယ် ... နောက် ၁ယောက်က ရေခဲမုန့်ကို အသာပဲ လျှက်နေတယ် ...နောက်
ဆုံး ၁ ယောက်က ရေခဲမုန့် ကို အားရပါးရ စုပ်နေတယ် ...အဲဒီ ၃ ယောက်ထဲမှာ ဘယ်သူက အိမ်ထောင်သည်လည်း ဆရာမ ။
ဆရာမ ။ ။ ဆရာမလည်းရှက်ရှက်နဲ့ပဲ ရေခဲမုန့်ကိုအားရပါးရစုပ်နေတဲ့သူက အိမ်ထောင်သည်ပေါ့ လို့ဆရာမကဖြေလိုက်တယ် ။
တပည့် ။ ။ ဆရာမ အဖြေကမှားတယ် ။ လက်ထပ်လက်စွတ်ဝတ်ထားတဲ့သူကအိမ်ထောင်သည်ပါဆရာမ။
တပည့် ။ ။ ဒါပေမယ့် ဆရာမ အတွေးခေါ်ကို သားကြိုက်ပါတယ် ။
၂၁ နှစ်အရွယ်ရှိ ကလေးအမေတစ်ယောက်က ရထားစီးရင်း
သူမကလေးကို ပြောတယ် .....
သားနိုစို့နော် မစို့ရင်ဘေးကဦးဦးကို စို့ခိုင်းလိုက်မှာနော်..
ငါကတော့ပိုပြီးသတိရတာပေါ့ကွာ..ဟီးဟီး...ဒါနဲ့ ငါမှာလိုက်တဲ့ ဘိုမလေးရော...."
Published at 12:06 AM in ဟာသ အတိုများ..
အမျိုးသမီးသည်လူငယ်ရှေ့ တွင်လာရပ်ပြီးသူ့ မျက်နှာကိုသေသေချာချာစိုက်ကြည့်သည်။
.....ရှင့်ကိုကြည့်ရတာကျွန်မရဲ့ အမျိုးသားနဲ့ အရမ်းတူတာပဲ..တူတာမှချွတ်စွတ်ပါပဲရှင်.... Wo
.....ခင်ဗျားလူမှားလို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်.... auu
.....ဖြစ်နိုင်ပါတယ်..ဒါပေမယ့်သေချာအောင်သူ့ အိမ်မှာရှိမရှိသွားကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်.... huwe
......ရှင်နဲ့ အင်မတန်တူတဲ့သူတောင်းစားတစ်ယောက်ကိုကုန်းတံတားမှာကျွန်မခုပဲတွေ့ ခဲ့တယ်ရှင့်..... Notice
......ခင်ဗျားလူမှားတာပါလို့ မင်းကိုကိုယ်ပြောပြီးပြီပဲ..... hum
လက်ထပ်ပွဲကျင်းပပြီးနောက် မိန်းကလေး၏မိဘများက သမက်ဖြစ်သူအား ဆုံးမစကား ပြောကြားလေသည်။
ဖခင်။.....။အပြောအဆို ချိူသာပြီး ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ ပါတယ်.....
ဖခင်။.....။ဒါကြောင့် ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောဆိုဆက်ဆံပါ။ ရန်ဖြစ်တာတွေ မကြားချင်ဘူး....
ဖခင်။.....။တစ်ခုတော့ ကြိုတင် မှာထားချင်တယ်။ သည်းခံပါမယ်လို့လည်း ကတိပေးစေချင်တယ်...
သမက်။.....။ဟုတ်ကဲ့ပြောပါ။ ကျွန်တော် သည်းခံ ပေါင်းသင်းသွားပါမယ်လို့ ကတိပေးပါတယ်...
ဖခင်။.....။အေးကွာ။ သမီးက ညဘက်ဆို ယောင်တက်ပြီး အိမ်အပြင်ထွက် တွေ့တဲ့အိမ်ပေါ်တက်ပြီး အိပ်တက်လေ့ရှိတာလေးပါပဲ....
အဖေနဲ့ အမေက သူ့ကိုဆိုအရမ်းချစ်ကြတရ်… အမြဲတမ်းသူ့ကိုဦးစားပေးတရ်…သူက သားဦးကို… နောက်တော့ သူလည်းညီလေးတစ်ယောက် ထပ်ရလာပါရော.. အဲဒီအချိန်က စပြီး သူ့ကိုဂရုမစိုက်ဘူး… သူ့ရဲ့ညီလေးကိုဘဲ အလေးပေးတော့တရ်… တနေ့ညမှာ သူညီနို့စို့နေတာကို မြင်ပြီး အကြံရသွားတရ်… ညကျတော့ ကြွက်သတ်ဆေးရည်တွေကို သူ့အမေအိပ်ပျော်နေတုန်း သူ့အမေရဲ့ နို့ကို သွားပက်ထားလိုက်တရ်… အဲ… မနက်လည်းရောက်ရော သူ့အဖေက ကုတင်ပေါ်မှာတင် သေသွားရောဗျာ.
လေးနှစ်သားကိုတိုး နှင့် ခြောက်နှစ်သားကိုဖြိုးတို့ မျောက်ညီနောင် သူတို့ အဘွားအိမ်သို့ အလည် ရောက်နေသည်။
ညအိပ် ချိန်တွင် မျောက်ညီနောင်အား အဘွားမှ ဘုရားရှိခိုး ခိုင်းဧ။်၊ ဘုရားရှိခိုးပြီးသောအခါ
ကိုတိုး ။ ။ စက်ဘီးတစ်စီးနဲ့ ဂိမ်းစက် တစ်လုံး ရ ရိုရပါလိုဧ။် ဘုရား (ကျယ်လောင်စွာဆုတောင်းလေသည် )။
ကိုဖြိုး။ ။ ဟေ့ကောင် ဘာလို့ အကျယ်ကြီးဆုတောင်းနေတာတုန်းကွ ၊ ဘုရား က နား မလေး ပါဘူး။
ကိုတိုး။ ။ အင်း ဘုရား က တော့ နားမလေးပါဘူး ၊
ဒါပေမယ့် အဘွားကတော့ နားလေးတယ်ဟ ။
ချစ်စခင်စ ကြင်နာစ ဇနီးမောင်နှံ နှစ်ယောက်ကနေ သားသမီးတွေ ပွားစီးလာတဲ့ အချိန်မှာ ဘယ်လိုဖြစ်သလဲ ဆိုတာကို
ညားကာစကတော့ မျက်စိအောက်က ပျောက်မသွားနဲ့ဦး တနေ့ကုန်ထိုင်ပြီး တစိမ့်စိမ့်ကြည့်နေတဲ့ မောင်ယောက်ျား.....
သူနားက တဖ၀ါးမှမခွာလို့ ချစ်တက်လိုက်တာလို့ ထင်ထားတဲ့ မမိန်းမ..... ကာလတွေ ရွေ့လျားလာတော့ ကလေးတစ်
အခေါ်အဝေါ်လေးကလဲ ပြောင်းလာတယ် မောင်ယောက်ျားက မမိန်းမ ကို ကလေးတစ်ယောက်အမေ လို့ခေါ်သတဲ့ လေ
အရင် ကအလုပ်ကိစ္စကလွဲလို့ သူ့အနားမှာပဲ အချိန်ပေးတဲ့ မောင်ယောက်ျား ဟာ ခုဆိုညနေစောင်းလာရင် လမ်းလျှောက်
ထွက်တက်လာတယ်... သွားခါနီးရင်လဲ ကဲ ကို အပြင်သွားလိုက်ဦးမယ် ကလေးတစ်ယောက်အမေရေ.....ဆိုပြီး လစ်ရော
မမိန်းမက ပြုံးပြုံးလေး ကြည့်လို့ ကျန်ခဲ့တာပေါ့ ... သကောင့်သားက KTV , တို့ ဘာတို့ သွားပြီ ရေလည်လန်းနေတာပေါ့
အဲဒီလို သွားတာလဲ ခဏခဏပဲလေ သွားတိုင်းလဲ သွားလိုက်ဦးမယ် ကလေးတစ်ယောက်အမေရေ.....ဆိုပြီး လစ်တာပေါ့
ဒီလိုနဲ့ တစ်ယောက်ကနေ နှစ်ယောက် ... နှစ်ယောက်ရလားတော့ သက်ပြင်းလေးတောင်ချလိုက်သေးတယ် ဟင်း.......
သွားလိုက်ဦးမယ် ကလေးနှစ်ယောက်အမေရေ.....ဆိုပြီး လစ်တယ်လေ မမိန်းမက ပြုံးတာကလဲ ပညာပါလာပြီဗျ .......
အဲ့ သုံးယောက်မြောက်မွေးတော့ ထုံးစံအတိုင်း ကလေး လေးလမပြည့်ခင်အထိ မိန်းမနား ကပ်သေးတယ် ...လေးလလဲ
ပြည့်ရော ထုံးစံအတိုင်း သွားလိုက်ဦးမယ် ကလေးသုံးယောက်အမေရေ.....ဆိုပြီး လစ်မလို့ ခြေလှမ်းနေတုန်း မမိန်းမ
က ပြုံးပြုံးလေးနဲ့ ပြန်ပြောလိုက်တဲ့ စကားကြောင့် နောက်သူအပြင်ကို မသွားတော့ဘူးတဲ့ ......................................
ခရီးသည်တင်လေယာဉ်ကြီး တစ်ဆင်းပေါ်တွင် လေယာဉ်မယ်က ခရီးသည်များအား သတိပေးစကားပြောလေသည်။
ခရီးသည်များ။…..။အားလုံးတိတ်ဆိတ်သွားပြီး လေယာဉ်မယ်ကို လှမ်းကြည့်လိုက်သည်။
လေယာဉ်မယ်။….။၀မ်းသာစရာစကားနှစ်ခွန်း နှင့် ၀မ်းနည်းစရာစကားတစ်ခွန်း ပြောကြားခွင့်ပြုပါ။
လေယာဉ်မယ်။…..။၀မ်းသာစရာစကားကတော့ ပထမအချက်အနေနဲ့ အခုခရီးစဉ် လေယာဉ်ခများကို အခမဲ့ဆီးနင်းခွင့် ပြုမှာမို့ ငွေများ ပြန်ထုတ်ဖို့ပါပဲ။
ခရီးသည်များ။……။"ဟေး" Good ဟုအော်ကာ ၀မ်းသာသွားကြသည်။
လေယာဉ်မယ်။…...။နောက်ထပ်ဝမ်းသာစရာတချက်ကတော့ ခရီးသည်တစ်ဦးကို ဒေါ်လာငွေ ၅၀၀၀ ဆီအပိုထပ်ဆောင်းပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ခရီးသည်များ။……..။"ဟေး" Good ဟုထပ်အော်လိုက်ကြပြန်သည်။
လေယာဉ်မယ်။…….။၀မ်းနည်းစရာ အရာတစ်ခုကတော့ ကျွှန်မတို့လေယာဉ် စက်ချွတ်ယွင်းပြီး မြေပြင်ကို ထိုးကျနေပီဆိုတဲ့ စကားပါပဲ ရှင်။
ခရီးသည်များ။……...။"ဟင်" ngo Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
Published at 6:17 PM in မေမေ.....
ဘော်သာ စွာသွေး ဖြူဖြူဖွေးသည်
ပြည့်တန်ဆာ အမေလည်း အမေ
ငွေသားအမွေ မပေးနိုင်မှ အမေမဟုတ်
လှဲခင်း အိပ်နေစရာ တိုးဖယ်ပေးခဲ့
အခြားပေးစရာ အထွေအထွေ မွဲသောလည်း
အမေဟာ အမေပဲလေ။ (အောင်လှိုင်ထွန်း)
မိဘကိုကျေးဇူးဆပ်ရန် အခြေအနေ (၄)ချက် ရှိရမည်…
(၄) ကျွေးနိုင်မွေးနိုင်တဲ့ ဓနဥစ္စာ ရှိရမည်။
(၁) သဒ္ဒါတရား မရှိတဲ့မိဘကို သဒ္ဒါတရားနဲ့ ပြည့်စုံအောင်၊
(၂) သီလမရှိတဲ့မိဘကို သီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်၊
(၃) မပေးရက် မလှူရက် နှမြောတွန့်တိုတဲ့မိဘကို စွန့်ကြဲပေးကမ်း
(၄) ပညာဥာဏ်မရှိတဲ့ မိဘကို ပညာဥာဏ်နဲ့ ပြည့်စုံအောင်၊
Published at 1:03 AM in ဟာသ အတိုများ..
a man was crying:O God! I have lost my hand, oh!
Sardar: Radio label shows Made in Japan but radio says this is 'All India Radio ! '
Valentine's story (1)
ဟာသ အတိုများ.. (13)
ကောင်လေးက ကောင်မလေးကို ဓါးနဲ့ ထိုးလို ကောင်မလေးသေခ...
ငှက်ပျောသီး၊ လှေကား၊ ရေခဲရေ၊ မျောက်များနှင့် ကျနော...
အသက်ကိုပဲအောင့်လို့ရ ရင်ခုန်သံဆိုတာအောင့်လို့မရဘူးလေ... ငါ့ရင်ဘတ်ကို လက်ယာလက်နဲ့သုံးသပ်တော်မူပါဦး ။ ။ "ချစ်လိုက်တာကွယ်"... ငါ့ရင်ဘတ်ထဲကအချစ်တွေ ၀င်လာတဲ့ အပေါက်ကနေပြန်ထွက်သွားကြစမ်း အဲ့လိုအာဏာမျိုး ရချင်ပါရဲ့ နေကလည်း .. ၀င်လိုက် ထွက်လိုက် ငါကလည်း .. မှိတ်တုတ် မှိတ်တုတ် လူမသိ သူမသိနဲ့ ငါ... တစ်ကိုယ်တော်ထစ်ချုန်းဖူးတယ်...။ ။ နေပါစေတော့ ခဏ ဆိုပြီး အငွေ့ပျံသွားတဲ့ နွေတုန်းဆီက သတ္တိတွေလည်း ဘယ်မိုးတွင်းရောက်ရောက်ငါ့ဆီ ပြန်..မ..ရွာ..ချ..တော့..ဘူး... ... ... ။ ။
အချစ်အကြွေးများနဲ့ သူငယ်ချင်း (DeepCorner)
lay ni yine
Copyright © 2010 ပြတိုက်.Wordpress Theme by Paddsolutions.
Blogger Template by Anshul Dudeja Free Blogger Templates.